Xilka oon Allah dartii loo gudan,Hantida umadda oo la xalaasha do,Geerida iyo xisaabta aakhiro oo danbeysa !!!
Marka hore waxaan salaan qadarin,sharaf iyo karaamaba leh u dirayaa dhammaan shacabka xariirta ah ee reer Somaliland iyo inta maqaalkan akhrisataba. Waxaan walaalayaal meel aad joogtaanba,idinku sal aamaya salaanta islaamka ee qiimaha badan,asalaamu calaykum waraxmatu laaahi wabarakaatu.Waxaa n Allaha awoodda leh weydiisanayaa,inuu idinka yeelo kuwii adduun iyo aakhiraba liibaana,dulmiga ka dh eeraada,Qabyaalada iyo urteedana ka fogaada.
Rabbigeen (TWC),isagaa kownkan abuuray,wax ka qarsoonina haba yaraate ma jiraan,maamulidiisana ci dna kama tala galiyo,waxaanu soo raaciyey Kitaabka Kariimka ah,oo uu ku cadeeyey dariiqa loo maro lii baanta adduunyo,dariiqa loo maro liibaanta aakhiro,wixii inoo xalaala,wixii innaga xaaraana iyo ciqaabtii sa darran.Waxaa biyo kama dhibcaana,in maanta Xilkii noqday dariiq loo maro in lagu taajiro ,laguna boo bo Hantida umada,oo aynu aragnay tiro aad u badan,oo intaan xilka loo dhiibin shaxaad ku noolayd,mud do yar ka dibna, Guryo,Fooqaq,Dhul boob,Hudheelo,Warshado,Baayac mushtar,iwm,ka binaystay. Balse ma moog yihiin,in Rabigeen (TWT),aanay waxba ka qarsoonayn,oo Xilka oo aan Allah dartii loo gudan,Ha ntida Umadda oo la xalaashado,ay geeri ka danbayso iyo xisaabtii aakhiro !!!.
Bal aan hal qiso idinla wadaago,kuna sahabsan khatarta ku sugan Hantida Umada oo la xalaashado,oo la xado.Waxaa Abu Huraira laga warinayaa inuu yidhi, Nabigeena Maxamed (CSW),ayaan la soconay,Khayb ar ayaan furanay,kana helnay xoolo mood iyo noolba leh.Nabigu (CSW),waa ka tagay waxaanu u waree gay meel la yidhaa Waadil Quraa,oo uu duulaan u aaday.Waxaa dadkii Nabiga (CSW),la socday ka mid ah aa,Wiil addoon ah,oo uu Nabiga uu u soo hadyeeyey nin la yidhaa,Rifaacat Binuzayd.
Wiilkaasi, Nabiga (CSW),wuxuu u ahaa gacantiisa midig,waxaanu ahaa saxaabi,muumin ah.Isagoo rarkii N abiga (CSW),dejinaya,oo furaya,ayaa waxaa ku dhacay Leeb,aan la garanayn meel uu ka yimid,waanu u geeriyooday.Asxaabtii kale markay arkeen,waxay isku yidhaadeen, Wiilkaasi waa ehlu Janno,maadaama uu ahaa addoon mumina,Nabigana (CSW) u adeegi jiray.
Nabigeenii Maxamed (CSW),markuu maqlay hadalkoodii wuxuu yidhi,sidaad moodeen maaha,ee Ilaahayg a Naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee,Marradii uu xaday maalintii Khaybar la furtay,intaan Qaniim ada la qaybin,ayaa korkiisa ku dul hurraysa,oo ku dul gubanaysa !!!!.Qisada Abu Huraira laga warinaya a,waxay inno cadaynaysaa,in Xaaraantu tahay mid Rabbi inooga digay,cidii u badheedhaana, ciqaabtee da mudan doonto.
Waxaan shacabka xariirta ah ee reer Somaliland u soo jeedinayaa, in cida ay u soo xulayaan doorashad a Golaha Wakiilada & Golaha Degaanka,ay aad uga fiirsadaan,kuna qiimeeyaan:
Hadaadse,kii intaaba ku sifoobay,aad maantana dib u soo doorato,berri ka maalin ha ka caban,ee dulqaa d u yeelo.....Eesh qiyaasak,maanagaa waalan ,mise Cadan baa laga heesayaa!!!!. Waxaan ku soo gunaan adayaa qormadaydan kooban,cid kasta oo kursi umadeed u hanqal taagaysaa,waa inay ogaadaan cawa aqibka laga dhaxlo,Xilka oon Allah dartii loo gudan,Hantida umadda oo la xalaashado,Geerida iyo xisaabt a aakhiro oo danbeysa !!!.